Isekela futhi imelane nokuvula izikhundla ezimakethe zamasheya | Ezezimali Zomnotho
Esinye sezici ezintsha kakhulu ukuvula noma ukuvala izikhundla ezimakethe zamasheya kwenziwa ngokusekelwa nangokumelana. Kepha siyazi ngempela ukuthi lezi zibalo ezimele zisho ukuthini ngempela? Yebo, ngaphambi kwencazelo yayo efanele, kuzodingeka ukuthi kuqashelwe ukuthi lemiqondo yemakethe yesitoko evelele iyithuluzi elisebenza kakhulu ku ukuhlaziywa kobuchwepheshe zezimakethe zezimali. Ukufika lapho behanjelwa yingxenye enhle yabatshalizimali abancane naphakathi ukuze balungiselele iphothifoliyo yabo yezokuphepha.
Ngaphakathi kwalesi simo jikelele, kungashiwo ukuthi ukusekelwa kuyizinga lentengo elinokwethenjelwa elingaphansi kwentengo yalo yamanje. Isu lakhe ukuthi umfutho owehlayo ungancishiswa ngakho-ke intengo izokwehla. Ngokuqina okukhulu noma okuncike ngokuya ngokuhlukahluka okuningi kwemakethe yamasheya. Ukuba kunoma iyiphi indawo ukuqala kokuqalisa ukusebenza ezimakethe zezezimali, ngisho nasezikhundleni ezinolaka kakhulu kunokujwayelekile kulawa macala.
Kuyimininingwane ebhekwa njengonokwethenjelwa kakhulu futhi engavamisile ukwenziwa futhi leyo iyimpendulo ye umthetho wokuhlinzeka nokufunwa wezibambiso ezisohlwini lwezinkomba zokulingana zamazwe ngamazwe Ngomkhawulo wezingxenye ezimbalwa kwezishumi ze-euro ukuze ungaphazami ekutholeni kwakho iqiniso. Akumangalisi ukuthi kungumthombo wenkomba olandelwa kabanzi yingxenye enkulu yabenzeli bezezimali. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kwezobuchwepheshe ngisho nasendaweni yokubuka izisekelo zayo.
1 Usekela futhi resistors
2 Isikhathi sale nhlangano yezobuchwepheshe
3 Amanani emazingeni okuvala
4 Ungasebenza kanjani ngalezi zibalo?
5 Ukuhweba emazingeni okusekela
6 Kulula ukutolika
Usekela futhi resistors
Ukumelana, kunalokho, kwakha ukunyakaza okuphikisana nalokho okumelwe ukwesekwa. Lokho wukuthi, kuyinani ngaphezu kwamanje futhi ngalokho-ke umfutho oya phezulu obusuthuthukile kuze kube manje uzophela. Kodwa-ke, ukubaluleka kwalokhu kuhamba okubalulekile kuhlala eqinisweni lokuthi uma kweqiwe kuleli zinga elifanele, amandla okubuyekeza abaluleke ngaphezu kokubaluleka. Kulindelwe inombolo enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi ukuqala imisebenzi yabo ezimakethe zezimali. Ngokunyakaza ngokuvamile okunokwethenjelwa kakhulu futhi okuyinkimbinkimbi kakhulu kumaphutha.
Ngakolunye uhlangothi, isampula lala mandla kulezi zinkomba zobuchwepheshe lisuselwa entweni elandelayo esizochaza ngayo ngezansi. Ngoba empeleni, ukwesekwa noma ukumelana kuthola i- amandla amakhulu Izikhathi eziningi ihlolwe ngaphandle kokuthi intengo yehle noma inyuke kusuka kulelo zinga okukhulunywa ngalo. Lesi ngesinye sezizathu esiyinhloko sokwethenjelwa kwaso ukuba namandla amakhulu futhi sisebenza ukwengeza noma ukuqeda amasheya kwiphothifoliyo yokutshala imali eyenziwe kuze kube manje.
Isikhathi sale nhlangano yezobuchwepheshe
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu zalezi zibalo ezibalulekile emakethe yamasheya sivela eqinisweni lokuthi njengokwesekwa noma ukumelana hlala isikhathi eside Okwamanje kubhekwa ukuthi ukusabela kwabo kuzoba kukhulu kakhulu. Ngamanye amagama, izoba namandla okwazisa amakhulu kunezinye izimo ezinezici ezifanayo. Lapho izeluleko ezinhle kakhulu kuzoba ukuthenga noma ukuthengisa izibambiso ukwenza inzuzo noma ukuvikela izikhundla zazo ezimakethe zezimali. Ngaphezu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe kuzindlela zabo zokutshala imali ezinamasu amaningi.
Kunoma ikuphi, futhi kufanele kuqashelwe kusuka kulo mzuzu kuqhubeke ukuthi lesi sigaba samanani esivame kakhulu kunoma yikuphi ukuhlaziywa kobuchwepheshe asinandaba nobude besikhathi obufanayo ngokuhamba kwesikhathi. Ngomqondo wokuthi ukumelana noma ukwesekwa okudonse isikhathi eside kunethuba elingcono kakhulu lokuvela ngokunqoba kulesi sigxobo esikhetheke kakhulu. Manje izonquma umfutho ukuthi ingaba nayo, ngenye indlela noma enye. Ukuze uma kunjalo, ungenza isinqumo ngezimpikiswano eziningi kakhulu kuze kube manje. Yinto okufanele uyiazise kusukela manje kuqhubeke futhi lokhu kuyisici okufanele sigcizelelwe.
Amanani emazingeni okuvala
Esinye isici okufanele sihlolwe kusuka manje kuye phambili ukuthi zombili izesekeli nokumelana kunamandla ingxenye engokomzwelo kusukela endaweni yokubuka emakethe yamasheya. Mayelana neqiniso lokuthi intengo yamasheya ezokuphepha ezisohlwini kufanele ivale izikhathi zokuhweba ngezansi noma ngaphezulu kwala mazinga. Ngenhloso yokuthi lezi zibalo zemvelo yemakethe yamasheya ziqinisekiswe ngaphambi kwezikhundla nezinqumo zabatshalizimali abancane nabaphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele kungakhohlwa ukuthi lezi zibalo zisetshenziswa nemvamisa ethile ukwenza imisebenzi yokuhweba. Lokho wukuthi, ngokuhluka okuncane kakhulu phakathi kokuthengiwe nokuthengisa kwabo futhi okudinga ukufunda okuqhubekayo ukulungisa amanani ngendlela efanele nangempumelelo. Akumangalisi ukuthi inkinga yayo enkulu ilele ekutheni la mazinga angaba i-alamu engamanga futhi angadala isimo esiyingozi kakhulu kwizintshisekelo zabatshalizimali abancane nabaphakathi. Lapho bangalahlekelwa khona yimali eningi kulolu hlobo lokuhamba ezimakethe zezimali.
Ungasebenza kanjani ngalezi zibalo?
Vele, ukusebenza ngezinsizakalo nokuphikiswa akunzima ngokweqile futhi kufanelekile kunoma iyiphi iphrofayili yabatshalizimali. Ngoba kusekelwe ekulindeni intengo yesitoko finyelela kulawo mazinga ukwenza isu lokutshala imali futhi lokho kungabaningi futhi kube nokuhlukahluka, njengoba uzokwazi ukuqinisekisa ngalezi zikhathi eziqondile. Esinye sezibonelo ezijwayelekile emisebenzini yokumelana nokulinda ukuthi kulalelwe lawa mazinga abalulekile ukuze kuthengwe nokuthi lokhu kungaba nolaka noma ukuqongelela.
Ngokuphambene nalokho, uma nganoma yisiphi isizathu lesi simo singenzeki, kungaba izaba ezinhle kakhulu zalokho hlehlisa izikhundla ngenani. Phakathi kwezinye izizathu, ngoba ukulungiswa kwamanani abo kungamakwa kakhulu kusukela lapho kuqhubeke. Kunoma ikuphi, akusona isimo sokuvula izikhundla ezimakethe zamasheya ngoba unawo wonke amavoti okushiya ama-euro amaningi emgwaqeni. Ngeke kumangaze kakhulu ukuthi izisekelo zoqobo zifunwa ukumisa ukuwa ngentengo yayo. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kokuhlaziywa kwezobuchwepheshe futhi mhlawumbe kusuka kumbono oyisisekelo.
Ukuhweba emazingeni okusekela
Imishini esekelini ifana ncamashi nakuma-resistances, ngaphandle komehluko othile noma omncane. Ngalo mqondo, kujwayelekile ukuthi lawa mazinga kokuqondile asebenzise okokuvikela ukuze kungabe kusaba khona ukwehla kunani. Kepha uma ngabe bekungenzekanga nganoma yisiphi isimo, ngeke kube khona ikhambi kepha ukuvala izikhundla ngoba ukuwa kusukela kulo mzuzu kuqhubeke kungaba kujule kakhulu ngokuqina. Uma, kunalokho, bema kula mazinga, kungaba iphuzu lapho a isigaba esisha se-bullish kuzimpahla zezimali, ngamandla amakhulu noma amancane.
Kulezi zimo, umkhawulo kufanele unikezwe ngentengo leyo makhi esekelayo ngenhloso enkulu yokungalenzi iphutha ekuxilongweni futhi lokho kungaba yisiphazamiso esikhulu kusomaqhinga oqashwe kutshalomali lwethu. Okungenani kufanele unikeze imajini encane ngamasenti ambalwa we-euro ngokuvumelana kwamanani. Ngakho-ke ngale ndlela, awekho amaphutha ezibalweni zokuhumusha lezi zibalo ezibalulekile emakethe yamasheya. Ngakolunye uhlangothi, kufanele wazi ukuthi lezi zibalo zemakethe yesitoko kulula kakhulu ukuzihumusha futhi ngokusebenzisa igrafu ebuyekeziwe zitholakala kalula kunoma iyiphi iphrofayili yokutshala imali.
Uma ulandela ezinye zalezi zeluleko, akungabazeki ukuthi uzobe usesimweni esifanele ukwenza ngcono ukusebenza ezimakethe zezimali. Ngale kwecebo ozolisebenzisa kumcimbi ngamunye. Kunoma ikuphi, ngokuqinisekile uzolungisa amanani kangcono kakhulu ukungena nokuphuma kumafa wezimali akhethiwe. Lolu uhlelo olulandelwa kabanzi yizo zonke izinhlobo zabatshalizimali abancane nabaphakathi, kusuka kulabo abanolwazi oluncane kulolu hlobo lomsebenzi kuya kulabo abahlinzeka ngokufunda okwengeziwe. Ngaphandle kokukhishwa kwanoma yiluphi uhlobo, ngoba imayelana nani, ngemuva kwakho konke, ukwenza inhlokodolobha izuze ngempumelelo enkulu kakhulu. Akusekho okungaphansi.
Ekugcineni, cabanga ukuthi lolu kungenye yezinhlelo ezilula onazo okwamanje zokusebenzisa nanoma iyiphi imakethe yezezimali. Ungakwenza kusukela ekuqaleni ngaphandle kohlobo lokuqapha ngoba alunamphumela omubi ezithakazelweni zakho zobuhlobo bakho nezwe lemali elihlale liyinkimbinkimbi. Kuzofanele ube nenkani kakhulu ngokusetshenziswa kwezihlungi ukuze ukwenze ngendlela efanele futhi ngaphezu kwakho konke okusebenzayo. Akumangalisi ukuthi lokhu kufanele kube enye yezinjongo zakho ezifanele kakhulu lapho wenza zonke izinhlobo zokusebenza ezimakethe zezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Isekela futhi imelane nokuvula izikhundla ezimakethe zamasheya